musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Bangkok iri kugadzirira njodzi huru yemafashama
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu vanomwe vakafa uye vaviri vakashaika kubva Svondo kubva kumafashama akakonzerwa neTropical Storm Dianmu.
Guta guru reThai reBangkok nedzimwe nzvimbo dzakapa yambiro nyowani yemafashama akasimba.
Parizvino, vanhu vanomwe vafa uye vaviri vakashaikwa mumafashama makuru akarova Thailand kubva Svondo.
Gavhuna weBangkok akabvuma kuti guta guru riri panjodzi yemafashama kubva kuChao Phraya.
Thailand's Dhipatimendi reDziviriro Njodzi uye Mitigations yataura nhasi kuti vanhu vanomwe vafa uye vaviri vakashaika kubva Svondo kubva mafashama akakonzerwa neTropical Storm Dianmu.
Thai vanoona nezvedambudziko yakazivisa kuti dzimba 197,795 mumapurovhinzi makumi matatu, kunyanya kuchamhembe, kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva nenzvimbo dzepakati dzakakanganiswa - 30-muzana kuwedzera pamusoro pevane 56 126,781 vakataurwa zuva rapfuura. Mvura yakasimba ichiri kufungidzirwa nzvimbo zhinji.
Zvino, guta guru re Bangkok nedzimwe nzvimbo dziri pakati peThailand dzakapihwa yambiro nyowani yemafashama akasimba, kunyangwe se vanoona nezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi vakati kutyisidzira uku kuri kudzikira mumatunhu gumi nematatu emakumi matatu kumwe kunhu kwakakonzerwa nekunaya kwemwaka wemwaka.
Huwandu hwemvura inoyerera ichidzika neChao Phraya kubva kuchamhembe yakanyanya madhamu nemadhamu, zvichikonzera kunyeverwa kwekukurumidza kupihwa Bangkok uye matunhu eLopburi, Saraburi, Ayutthaya, Pathum Thani neNonthaburi.
Bangkok Gavhuna Aswin Kwanmuang akabvuma nhasi kuti nekuda kwekuti guta guru riri panzvimbo yakaderera, rinokanganiswa nemafashama kubva kuChao Phraya, uye harigone kukasira kukurumidza. Zvikamu zveguta zvakazadzwa nemafashama makuru a2011, akapihwa mvura nemvura yakaburitswa kubva mumatura ekuchamhembe.
Gavhuna akaronga matanho ari kutorwa neguta kuti atsungirire mafashama, kusanganisira kugadzirira pombi dzemvura dzinobatana nemugwagwa mukuru wemvura.
Nepo madhamu makuru nemadhamu ekuchamhembe ave kugona kutsungirira kunaya kwegore rino, vamwe vari padyo neBangkok vakasvika kana kudarika chinzvimbo chavo mwedzi uno uye vakafanirwa kuburitsa mvura.